Madasha Xisbiyada Qaran oo baaq culus kasoo saarey dagaalka Gobolka Mudug – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madasha Xisbiyada Qaran ayaa Maanta oo Talaado ah waxaa ay baaq nabadeed kasoo saareenb dagaalka laba maleeshiyo Beeleed ku dhexmaray deegaano ka tirsan bariga Gobolka Mudug.
Dagaalka ayaa waxaa uu sigaar ah uga dhacay deegaannada Towfiiq iyo Af-barwaaqo,kaas oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac labada dhinac ee dagaalamay ah.
Qoraal Madasha kasoo baxay oo uu ku saxiixan yahay Guddoomiyaha Madaasha Xisbiyada Qaran Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaa loogu codsaday maleeshiyaadka dagaalamaya inay si deg deg ah dagaalka ku joojiyaan,sidoo kalena Odayaasha Dhaqanka iyo Culuma’udiinka loogu baaqay inay ka qeyb qaataan joojinta colaadaas.
Hoos Ka Akhriso Qoraaka Madasha Xisbiyada Qaran.